Iyo Yakanakisa Yemunhu Kugovana Bhatani Plugin yeWordPress | Martech Zone
Mavhiki mashoma apfuura, mumwe munhu mune yangu Facebook network akabvunza kuti ndeapi akanakisa ekugovana bhatani plugins aive kunze uko kweiyo WordPress. Ini ndaida kuve nyore kwe JetPack's Shambadzira uye nenyaya yekuti yakagadziriswa neAutoattic programmers (ivo vanogadzira WordPress); zvisinei, anga ari marongero angu ekugashira kana imwe plugin yakapa iyo yekugovana popup isina basa (nekuda kwa Michael Stelzner yekunongedzera izvo!). Ndichiri kushandisa plugin kupusha zvirimo kunetiweki dzemagariro, asi ini handisi kushandisa mabhatani ekugovana panzvimbo ino.
Isu taishandisawo kushandisa iyo Flare plugin izvo zvaishamisa kwazvo. Nekudaro, iyo kambani yakasiya iyo plugin uye ikozvino yave kutengesa yavo yemagariro mabhatani sekunyoresa. Sevhisi haina kushanda zvakare uye ini ndakaramba ndichimhanyisa mune dzakawanda uye zvakanyanya nyaya saka ndakaisiya uye plugin. Zvakaipa sezvo chimwe chezvinhu zvikuru ndechekuti ini ndaigona kuwana zvikamu zvacho zvechero posvo uye ini ndakagadzira imwe kodhi kuti ndizviise kune imwe nzvimbo mutemplate kuti inyenge vanhu vazhinji kuti vaverenge.
Saka, kuvhima kwaive kuri kukuru WordPress plugin iyo yaizopa yakanaka inogadziriswa bhatani bhaa uye yakaurayiwa yesarudzo. Ini ndakaita kuverenga kwakawanda uye kuyedzwa kwemakumi emapulagi uye zvigadzirwa uye iyo kufona yakapera mukutenga kweiyo Nyore Social Kugovana Mabhatani eWordPress.
Iyo plugin haisi iyo zviri nyore kumisikidza uye kugadzirisa, asi wizard yemukati iri nyore uye sarudzo dzepamberi dzakawanda, kusanganisira zvemagariro zvinotevera mawadhi uye kunyange mamwe ekugovana analytics.
Ini ndasanganisira yedu yakabatana link pane ino positi - tora iyo Nyore Social Kugovana Mabhatani eWordPress uye rega vaverengi vako vakukurudzire!
Tags: facebook bhatanigoogle + bhatanibhatani rezvemagariroYemagariro bhatani wordpress pluginmabhatani emagariroyemagariro share mabhatani nyore yemagariro share mabhatani akanakisa ezvekugovana mabhatanimagariro ekugovana metricspasocial share wordpress plugintwitter bhataniWordpress plugin